बेलबारी नगरपालिकाको वडा नं. ६काे धैतिखोलामा सेल्फी पुल निर्माण । -
मोरङको बेलबारी नगरपालिकाको वडा नं. ६ धैतिखोलामा निर्माण गरिएको सेल्फी पुलको उद्घाटन गरिएको छ । आइतबार बेलबारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदीले एक कार्यक्रम गरी पुलको उद्घाटन गर्नुभएको छ ।
मेयर सुवेदीले नवनिर्मित पुलमा आफैं गाडीसमेत चलाउनुभएको थियो । ५ लाख ९७ हजार ८ सय ९१ रुपैयाँमा निर्माण भएकाे पुलमा बेलबारी नगरपालिकाले ५ लाख ३० हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने ६७ हजार ८ सय ९१ बरबरको स्थानीययको जनसहभागिता रहेको छ ।
पुल नहुँदा ज्यानै जोखिममा हिँड्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको स्थानीय इन्द्रकुमार मगरले बताउनुभयो । पुलको उद्घाटन गर्दै मेयर सुवेदीले दुर्गम वडाहरूलाई उच्च प्राथमिकता राखेको बताउनुभयो ।
स्थानीयको आर्थिक स्तर उन्नतिको लागि बिनाधितो २ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत ऋण प्रदान तथा गरिबसँग नगरपालिका जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम नगरपालिकामा सञ्चालन गरेको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । पुल निर्माण हुँदा स्थानीयलाई आवतजावतको लागि सहज भएको छ । पुल निर्माण भएपछि स्थानीयले पुलको नाम सेल्फी पुल राखेका छन् ।
थोरै लगानीमा आकर्षक पुल बनेपछि युवा युवतीहरु सेल्फी खिच्न आउने गरेकोले सेल्फी पुल नामाकरण गरिएको स्थानीय मनोज राईले बताउनुभयो । पुल बनेपछि छिमेकी नगरपालिका रंगेलीका जनतालाई समेत राहत पुगेको वडाअध्यक्ष उदयबहादुर राईले बताउनुभयो ।हाम्राेमतबाट